Shirkii Soomaalida ku saabsanaa ee London oo si toos ah u soconaya. – SBC
Shirkii Soomaalida ku saabsanaa ee London oo si toos ah u soconaya.
Posted by Webmaster on Febraayo 23, 2012 Comments
Waxaa si toos ah uga soconaya magaalada London xarunta Dalkaasi Ingiriiska kulankii loo ballansanaa ee looga hadlayay xaalada Dalka Soomaaliya kaasi oo ay ku sugan yihiin madaxtiro badan oo ilaa 40 gaareysa.
Kulankaasi ayaa waxaa uu si toos ah u bilowday waxaana halkaasi ka hadlay ugu horeyn Raiisul wasaaraha Dowlada Ingiriiska waxaanu sheegay in siweyn looga baahanyahay dhamaan madaxda isugu timid shirkaan ay u istaagaan sidii ay u caawin lahaayeen umada soomaaliyeed si ay cago adag isu taagaan
Waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay madax kala duwan oo ay ka mid ahaayeen madaxda dowlada KMG ah ee Soomaaliya iyo weliba wakiilo iyo madaxda qaar ka mid ah wadamada Africa sida madaxweynaha uganda.
Kulanka si toos ah ayuu u soconayaa waxaana sida la shaaciyay uu socon doonaa mudo saacado ah oo ku kooban 5 saacadood ka dibna ay jiri doonaan kulamo saxaafada loogu faah faahinayo waxyaabihii ka soo baxay .
Waxaanad ku arki doontaan wararkayaga dambe waxii ka soo baxa.